सुन्दरी छोरीसँग विवाह गर्ने केटोलाइ दुई करोड दिने बाबुको घोषणा !…..हेर्नुहोस् पुरा विवरण - Mitho Khabar
सुन्दरी छोरीसँग विवाह गर्ने केटोलाइ दुई करोड दिने बाबुको घोषणा !…..हेर्नुहोस् पुरा विवरण
June 23, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on सुन्दरी छोरीसँग विवाह गर्ने केटोलाइ दुई करोड दिने बाबुको घोषणा !…..हेर्नुहोस् पुरा विवरण
काठमाडौं । थाइल्याण्डका एक करोडपतिले आफ्नी कुमारी छोरीसँग विवाह गर्ने केटालाई दुई करोड भन्दाबढी रकम दिने घोषणा गरेका छन्।
थाइल्याण्डको दक्षिणी प्रान्त चुन्फोन प्रदेशका करोडपति अर्नोन राेडथोंगले छोरी कार्नसितासँग विवहा गर्नेलाई उक्त रकम दिने घोषणा गरेका हुन्। कार्नसिता २६ वर्षकी छन्। उनले ब्याच्लर पढेकी छन् भने चिनियाँ र अंग्रेजी भाषा बोल्न सक्छिन्।
५८ वर्षका अर्नोन फलहरूको फार्मका मालिक हुन्। उनले आफ्नी छोरीसँग विवहा गर्ने केटामा तीन योग्यता हुनु पर्ने बताएका छन्। केटा स्मार्ट हुन जरुरी छैन तर पढ्न लेख्न जानेको हुनुपर्छ । अल्छी हुुनु हुँदैन परिश्रमि हुन जरुरी छ।
पैसाका बारेमा कन्जुस र फलहरूलाई माया गर्ने हुन जरुरी छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नी छोरी कुमारी रहेको र पारिवारिक व्यापारमा सहयोग गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । विवाहका लागि राष्ट्रियताको सीमा जरुरी नभएको उनले बताएका छन्।
याे हाे दुई जना महिलासँग विवाह गर्नै पर्ने देश
विहेको केहि दिन अघि प्रेमीका गुमाएका प्रकाशले भ्यालेनटाईन डे को दिन ३ करोड नेपालीलाई रुवाउने के गरे यस्तो ?
के चर्चित नायक बिराज भट्ट र निखिल उप्रेती बिच दुश्मनी छ ? बिराज भट्टले खोले भित्री कुरा (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
चर्चित गित ‘गलबन्दी’ की लजालु अन्जली अधिकारि वास्तविक लजालु जिवनमा यस्ती छिन चिन्नै गाह्रो ? (भिडियो हेर्नुहोस)
नायिका रेजिना उप्रेती ‘विवाह गर्ने बित्तिकै नायिकालाई हेला गर्छन्, हामीलाई खेलाउँदा फिल्म चल्दैन रे’…..[हेर्नुहोस पुरा विवरण भिडियो]
वे’प’त्ता प्रहरी जवान रामबहादुर साउद पनि मृ’त भेटिए
लाखौं पुगेको सुनको मूल्य आज सोच्नै नसकिने गरी यस्तो भयो ।
फेरि अर्को ब’ज्रपात भर्खरै राजधानी मा अवतरण गर्दागर्दै वि*मान दु’र्घटना, ४१ जनाको मृ’त्यु
कोरोनाबाट बच्न मास्क लगाउनुहुन्छ?झन् खतरामा हुनुहुन्छ।बाहिरियो यस्तो डरलाग्दो तथ्य,ढिला नहुँदै पढ्नुहोला
BREAKING:भर्खर गयो ७.३ रेक्टरको ठुलो भुकम्प।कोरोना महामारीको बेला अर्को बिपत।पुरा पढ्नुहोस
खुसिको खबरः एकल पुरुषले पनि पाउने भए भत्ता
दुखद खबर आज एकैदिन यति धेरैको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गयो,
चार छोराछोरीलाइ लिएर खोलामा हाम फालिन आमा, सबैको मृ’त्यु
अन्तत: दसैंभर नै लकडाउ गर्ने निर्णय ! भर्खरै आयो यस्तो सूचना
‘२५ क्वीन्टल केराउ तस्करी गर्न नदिँदा असई र जवान मारिए’
चीनको खोप प्रभावकारी भन्दै ब्राजिल ४ करोड ६० लाख डोज खोप किन्न तयार